EKPERE KALAHARI MAKA AKWATKWỌ BATANYI AKW NEWKWỌ M MARA 21, 2013 - Afrikhepri Fondation
Satọde, June 12, 2021
KALAHARI BỤGHỊ BATTLE 21 MARS 2013 BỤ ỤLỌ BỤ
Ndị San na-achọ ọchịchị ha maka oge nke atọ maka udo na ala ha na Reserve Kalahari Central.
The San nke Botswana kpọpụ ọchịchị iwu na-akwadoghị agọ ohere n'ala nna ha na Central Kalahari Game Reserve. Na 2006, 700 na San onye a chụrụ idobere afọ anọ tupu mgbe ahụ merie a ogologo ikpe megide ọchịchị Botswana Akwa Court maka nri laghachi. Kemgbe ahụ, gọọmenti egbochighị mgbalị iji belata ọnụ ọgụgụ nke ndị San na-ekwe ka ha biri na ebe nchekwa ahụ.
- Gọọmentị na-ekwu na mkpebi ahụ metụtara naanị 189 San na ndepụta mbụ nke ndị gbara akwụkwọ; ọ na-agọnahụ ịbanye na ebe nchekwa na-enweghị ikike nye ndị na-anọghị na ndepụta a. Dị ka ikike dị irè naanị otu ọnwa, ndị gafere oge ha nwere ike ijide.
- ofmụ nke ndị na-eme mkpesa nke 189 nwere ike ịbanye naanị na ebe nchekwa ruo mgbe afọ 16, mgbe nke a gasịrị ha ga-etinye akwụkwọ maka ikike otu ọnwa.
- Ndị nche oke ọhịa amachibidoro ịgafe ehi na ịnyịnya ibu ndị eji eme njem.
- Onwebeghi San natara ikike ịchụ nta na ebe nchekwa, nke na - eme ka ọ ghara ikwe ha omume ịchụ nta.
Otu San gwara Survival: '[Ịbụ itinye akwụkwọ ikike] na-eme ka m chee na enweghị ụlọ. Anyị amaghị mgbe ha ga-akwụsị anyị ma ọ bụ mgbe ha ga-ewepụ ikike anyị. Achọrọ m ịnọ n'ụlọ ma ghara ịdabere n'onye onye ọzọ kwere ka m nọrọ ebe ahụ. '
Nke a ga-abụ nke atọ oge a manyere San ka ọ bịa n'ụlọikpe na mgba ha na-agba iji biri n'udo n'ókèala ha.
Ikpe ikpe akụkọ banyere 2006 kwadoro ikike San na-ebi ma na-achọgharị na mpaghara ahụ, na-enweghị mkpa maka ikike ịnweta ya.
Egwu, egwu na njide nke San abanyewo na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Na November 2012, ndị ikom abụọ na-tie na im maka ịchụ nta na na January, ụmụ atọ e jidere maka iburu ndị ele anụ.
Stephen Corry, onye nduzi nke Survival International, kwuru taa, sị, 'Gọọmenti na-aga n'ihu na-ama aka n'ụlọikpe kachasị elu na Botswana na iwu nke ya n'onwe ya n'enweghị ihe ọ bụla ọ pụtara. Ndị ụtụ isi nke Botswana agaghị anabataghachi ihe mkpofu ahụ ọzọ maka ego ọha na eze na agha ọhụrụ. Maka ihe karịrị afọ 30, gọọmentị anaghị etinye mgbalị iji mee ka ndị bi na ya ghara ịdị na-eri Bushmen. Oge eruola ka ụmụ amaala Botswana biri na udo na nnwere onwe na ala ha. '
Foto: Na 2006, Courtlọikpe Kasị Elu nke Botswana kwadoro ikike nke San ibi na ịchụ nta na ebe nchekwa, na-enweghị mkpa ịnweta ikike iji nweta ya
Garret Augutus Morgan, onye na-emepụta ụzọ ọkụ ọkụ
Nsogbu adabaghi ​​- Akwukwo (2017)
Sayensị na-ese foto mkpụrụ obi na-ahapụ ahụ mmadụ mgbe ọ nwụrụ
Berry si n'osisi Australia na-egbu etuto ahụ
Cosmogony na Ewe